Miara-mizara ny drafitr'izao tontolo izao ho an'ny vondrona Kimroy Bailey ny MultiBillionaires
19Jul Jolay 19, 2018
Ny vondrona Kimroy Bailey dia manelingelina ireo modely sy foto-kevitra maro momba ny orinasa amin'ny taonjato 21r. Voalohany dia nanambara tamim-pahasahiana tao amin'ny tranokalany ny orinasa fa orinasam-barotra tsy miankina izy ity izay tarihin'i Jesosy Kristy sy ny Fanjakan'ny Lanitra. Ny vondrona orinasa izay misy Kimroy Bailey Renewables LLC, Kimroy Bailey Robotics Ltd, ary ny Kimroy Bailey Foundation samy nitantana teo ambanin'ny vavahadin'ny Kimroy Bailey Group INC.
Ireo tompona an'arivony tapitrisa, mpivady duo, Kimroy Bailey sy Sherika Trott-Bailey dia tsy manome fepetra momba ny maha-mpianatr'i Jesosy Kristy azy, izay tanjony dia ny hampisehoana an'i Kristy ao amin'ny tontolon'ny orinasa.
Ireo mpivady amin'ny tenin'izy ireo dia milaza an'io "wMisy olona mieritreritra an'Andriamanitra, indrindra ny Kristiana, tsy mieritreritra momba azy amin'ny resaka fandraharahana izy. Aleon'ny olona mitazona an'Andriamanitra ao anaty boaty kely fivavahana. Na izany aza, Andriamanitra no olona tena mpandraharaha lehibe indrindra - tsy araka ny fomban'izao tontolo izao na ny fenitra na ny fenitra toa toa marina sy ara-pivavahana aza izay mitazona ny fiangonana. Satria ny lalany lavitra be lavitra sy manimba ny lalantsika manao zavatra eto an-tany"
Ny vondrona Kimroy Bailey dia mofomamy hafahafa ao amin'ny tontolon'ny orinasa iray izay manjaka ny kapitalisma, nefa tadidio fa tsy orinasa fluff ity. Io goavam-be dolara an'arivony dolara io dia nidina tamina sehatra teo ambanin'ny marika Kimroy Bailey Robotics tamin'ny fivarotana ireo fiofanana momba ny masoandro any anaty Internet. Roa taona aty aoriana Dingana-vita-mandeha amin'ny masoandro no lisitry ny fivarotana iray tokana amin'ny Internet! Mandrakotra na dia eo aza ny vidin'ny fivarotana avy amin'ny andrim-panjakana azo antoka toy ny Harvard sy MIT.
Ny sasany amin'ireo drafitr'Andriamanitra ho an'ny vondrona Kimroy Bailey
Ny vondrona Kimroy Bailey dia goavambe mipoitra amin'ny indostrian'ny angovo azo havaozina. Nahavita nanangona ny indostrian'izy ireo an'arivony miliara dolara nantsoina hoe robie vaovao. Ny andian-tsarin'ny vondrona dia avy amin'ny e-varotra ho an'ny Lalam-piofanana an-tserasera Solar, Fitaovana Fananganana Solar & rivotra, fampiharana amin'ny haino aman-javaboary sy fianarana.
Ny vondrona dia manolotra serivisy amin'ny raharaham-barotra toy ny Business Process Outsourcing and Consultation Services amin'ny indostria isan-karazany tafiditra amin'izany fa tsy voafetra ho: angovo azo havaozina (Solar & Wind), Robotics & Artition Intelligence, Fanabeazana, Home automation, Hotel, Media, Movie, Lamaody & fialamboly.
Ny Groupe Kimroy Bailey dia mamorona vorona vaovao ao amin'ny Indostrian'ny Fampandrosoana ny App miaraka amina bika ao amin'ny Fampivoarana angovo azo havaozina, angovo azo havaozina mifandraika amin'ny fanavaozana ary ny hetsika Robot & Entertainment.
Ny Bailey's Renewable Robotics Mult-Billionaires
Andriamanitra no fitaomam-panahy naseho an-tsokosoko tao ambadiky ny orinasa Kimroy Bailey ary ireo hevitra rehetra sy vokatra nipoitra avy amin'ity orinasam-pitombo ity. Sherika sy Kimroy Bailey dia mamaritra ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra.
"How azoko lazaina hoe- Popsie (anaram-bositra hoe Andriamanitra) manao BIG! He showstopper izy ary ny drafitra ho an'ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany dia 100,000,000illillion tsara kokoa noho ny an'ny tenany. Saingy ny olon-drehetra dia tokony hanana fifandraisana sy traikefa amin'Andriamanitra ary mino ny tenany. Andriamanitra tsy manery ny tenany amin'olona, ​​omeny safidy ny rehetra ”
Mitohy i Sherika,
“Izaho sy i Kimroy dia mino an'Andriamanitra amin'ny zavatra mahavariana ary noho izany dia mahazo zavatra tena miavaka izahay. Mandritra izany fotoana izany dia mety maniry zavatra tsotra ihany ny olona iray ka izany no ahazoana zavatra tsotra-an'Andriamanitra. Tsy misy maharatsy ny zavatra tsotra fa ny tianao hanananao ”
Izahay mivady dia tiako ny hamela ny Andriamanitra hampitatra ny hozatra eo amin'ny fiainantsika. Tena mahalasa an'Andriamanitra ny mpino eto an-tany izay handray azy amin'ny teniny ka mino azy amin'ny fanoherana rehetra. " hoy i Sherika Trott-Bailey.
Ny mpivady an'arivony tapitrisa izao dia nivoaka niaraka tamin'ny robot tsy manam-paharoa amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ity robot fampidirana ity izay mampianatra ny nanombohana ny fototry ny robotika dia ny atidohan'ilay ekipa mpivady mavitrika Kimroy sy Sherika Trott-Bailey. Ny Rasta Robot ihany koa dia miampita ao amin'ny niche fanavaozana azo havaozina amin'ny alàlan'ny fanomezana toro-hevitra an-tànana sy ny fifampidinihana tena misy amin'ny fametrahana ny rafitra angovo azo havaozina.
Iray amin'ireo vokatra avy amin'ny vondrona Kimroy Bailey, ny Rasta Robot izay mampianatra ny fototry ny robotika
Fa Fa Maninona no Rasta Robot?
Miara-manambara i Kimroy & Sherika fa "tahaka ny maro amin'ireo vokatra vokarintsika, ny hevitra dia avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra dia manana fitiavana sy vina maneran-tany ho an'ny firenentsika any Jamaika sy izao tontolo izao. Ho an'i Jamaica dia tian'izy ireo aseho an-tsary amin'ny fomba hafa amin'ny fomba hafa ny vahoaka sy ny kolontsaintsika. Izahay ihany no vonona vonona hampiasaina. Ny sarin'ny kolontsaina malaza "Rasta" dia matetika aseho amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny maha-olon-tokana any amin'ny tropika mifoka rongony, eo amoron-dranomasina, eo ambanin'ny hazo voanio. Te-hitsoaka an-tsoratra izahay. Ankehitriny rehefa mieritreritra an'i Rasta ny olona dia ilaintsika ny mieritreritra-'Oh Yeah Jamaikana teknolojia, manodin-tsaina, marani-tsaina ary manam-pahaizana 'satria izay no maha-isika antsika."
Ny turbine-drivotra robotic
Ny famoronana ihany koa avy amin'ny vondrona Kimroy Bailey dia ny turbine Wind Intellotic Robotic. Ny teknolojia fanovana lalao ity dia miomana hanova ny teknolojia turbine rivotra static amin'izao fotoana izao.
Inona ny olana misy?
Ny teknolojia turbin-drivotra amin'izao fotoana izao dia afaka mampisy angovo ao amin'ny faritra avo ihany. Vokatr'izany, ny fampiasana azy dia voafetra amin'ny faritra vitsivitsy ao anatin'ny firenena vitsivitsy. Ny faritra avo amin'ny rivotra avo lenta dia azo atao rehefa mifanakalo amin'ny turbin-drivotra amin'ny habakabaka izay mety hamokatra herinaratra mahery vaika.
Alao sary an-tsaina anefa fa misy ny filaharana voalahatra sy ny zoro manodinkodina ho an'ny vovoka turbine rivotra izay ahafahan'ny famokarana herinaratra na dia amin'ny rivotra ambany aza. Inona no dikan'izany ho an'ny tontolo hafa izay tsy dia misy rivotra firy amin'ny tendon'izy ireo?
Fehiny ho an'ny zanak'Andriamanitra
Mijanona tsara arakaraka ny famoronana mavitrika sy manerantany no nivoaka avy amin'ity fianakaviana ity sy ny vokatra sy serivisy maro ao aminy. Ity vondrona orinasa Kimroy Bailey ity dia azo antoka fa mitazona izao Tontolo izao amin'ny rantsan-tongotra ao anaty rantsan-tongony satria mivelatra haingana sy manjaka ny tontolon'ny vola sy ny orinasa izy io. Fotoana fohy alohan'ny trily tapitrisa dolara, manankarena lavitra ny harenan'ny orinasa na Vondron'olona orinasa ankehitriny - anarana hoe Walmart, State Grid Corporation of China, vondrona Sinopec, Toyota Motor, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Apple Inc , Facebook LLC, Amazon, Google dia nanomboka nirotsaka tao amin'ny vondrona Kimroy Bailey. Andao hiantsoana azy fotsiny hoe dolara-dolara.
26Apr Aprily 26, 2013
Angovo entin'ny rivotra amin'ny herin'ny rivotra 60% amin'ny nosy lehibe indrindra ao Grenada
Ny nosy Grenada dia tokana azo antoka fa ny vidin'ny herinaratra avo indrindra any Karaiba amin'ny tahan'ny US ₵ 60 / ... hamaky bebe kokoa
PetroCaribe Solution: mampiditra ny fanavaozana vaovao any Karaiba
Ny filoham-pirenena Venezoeliana teo aloha Hugo Chávez Ny fahafatesan'ny filohan'i Venezoelana Hugo Chávez dia niteraka ahiahy nanerana an'i Karaiba ... hamaky bebe kokoa
23Apr Aprily 23, 2013
Trano maitso sy azo havaozina
Miaraka amin'ny fepetra ara-toekarena izay atrehanay ny Jamaikana isan'andro, tsara foana ny mitady lalana ... hamaky bebe kokoa
24Oct Oktobra 24, 2012
Andro farany amin'ny fihaonambe maneran-tany maneran-tany
Ny IEEE Global Humanitarian Conference 2012 dia kely kokoa hamaky bebe kokoa